warkii.com » Wararkii Ugu Danbeeyay Heshiiska Weyn Ee Ay Man United Kula Soo Wareegeyso James Rodriguez
Wararkii Ugu Danbeeyay Heshiiska Weyn Ee Ay Man United Kula Soo Wareegeyso James Rodriguez
Manchester United ayaa lagu xamanayaa inay qarka u saaran yihiin inay dhameystiraan heshiiska ay kula wareegayaan xiddiga doonaya inuu isaga tago Real Madrid ee James Rodriguez.
Rodriguez ayaa udub dhexaad u ahaa wararka suuqa kala iibsiga Real Madrid ee xilli ciyaareedkan iyadoo tababare Zinedine Zidane uu diyaar u yahay inuu iibiyo xiddiga reer Colombia ka dib markii uu ku guuldareystay inuu qeyb ka noqdo qorshihiisa xilli ciyaareedka.
Xiddigii hore ee AS Monaco ayaa kaliya ku soo bilowday shan kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkan iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga danbe ee 2021, waxayna u muuqataa inay hubaal tahay inuu kooxda ka tagayo xagaagan.
Tababare Carlo Ancelotti ayay lala xiriiriyay inuu dib u la midoobayo Rodriguez oo uu keensanayo kooxda Everton sannadkan 2020.
Si kastaba, wargeyska Ingariiska ee Daily Express ayaa sheegaya in kooxda Ole Gunnar Solskjaer inay hogaamineyso haatan tartanka saxiixa ciyaaryahankaan iyagoo kula soo wareegaya heshiis 25 milyan euro ah.
Real Madrid ayaa hoos u dhigtay qiimaha ay dulsaartay James Rodriguez oo suuqii kala iibsiga Janaayo ahaa 50 milyan euro.
Ma jirto koox diyaar u ah inay lacag ka badan 30 milyan euro ka bixiso ciyaaryahan qandaraaskiisa Madrid uu dhacayo sannadka danbe.
Wargeyska Express ayaa sheegay in Real Madrid ay la kulantay wakiilada ciyaaryahanka islamarkaana ay isku raaceen inuu bixi karo.
United ayaa si dhaqso ah uga jawaab celisay iyagoo isbuuca soo socda wadahadalo la bilaabaya wakiilada ciyaaryahanka.
Rodriguez ayaa jecel fekerka ah inuu ka ciyaaro Old Trafford ka dib amaah uu ku joogay Bayern Munich laakiin kooxo ka dhisan France iyo Italy ayaa sidoo kale xiiseynaya.
Ilo ku dhow ciyaaryahanka oo ka ciyaari kara khadka dhexe iyo garab weerar ayaa u sheegay wargeyska Express: “Wuxuu doonayaa inuu aado England marka loo eego wadan kale”